Freeski Sky Final တွင်တရုတ် ကစားသမား Gu Zilin သည် အိုလံပစ် ရွှေတံဆိပ် ကို ဆွတ်ခူး ရရှိ ခဲ့သည် - Pandaily
Feb 08, 2022, 14:52ညနေ 2022/02/08 23:44:43 Peter Catterall
အင်္ဂါနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် တရုတ်-အမေရိကန် နှင်း လျှော စီး ပါရမီ ရှင် Gu Ailing သည် အမျိုးသမီး Friesky Great Sky Final တွင် အနိုင်ရ ခဲ့ပြီး သူမ၏ အလားအလာ ကောင်း သည့် လူငယ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း မှုတွင် ပထမဆုံး အိုလံပစ် ဆုတံဆိပ် ကို ဆွတ်ခူး နိုင်ခဲ့ပြီး ယခုနှစ် ဘေဂျင်း ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ် တွင်တရုတ် အသင်း၏ ဆုရ ရှိသူ များစာရင်း ကိုထပ်မံ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
အသက် ၁၈ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်သော ဂူ သည် သူမ၏ မိခင် ၏ မွေးရပ် မြေ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အမှတ်အသား ဖြစ်လာသည်။ သူသည် ပြင်သစ် နိုင်ငံမှ Tess Ledo နှင့် ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံမှ Mathilde Greymoud တို့၏ နောက်တွင် သူမ ၏နောက်ဆုံး ခုန်ချ မှု ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ရည်မှန်းချက် ကြီး သည့် “Double Left 1620 and Safe Grab” ကိုအောင်မြင်စွာ ဆင်းသက် ပြီးနောက် သူသည် အောင်ပွဲခံ အော်ဟစ် ခဲ့ပြီး မြေပြင် သို့ လဲကျ သွားသည်။ လူအုပ် က သူမ၏ ရမှတ် ကို ကြေငြာ ရန် စိုးရိမ် နေကြသည်။
နောက်ဆုံး ရမှတ် တွင် တရားသူကြီး များက Gu Kailai ကို ၁၈၈. ၂၅ မှတ် ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ငွေ တံဆိပ် Ryder ၏ ၁ ၈၇. ၅ မှတ် ထက်အနည်းငယ် ပို သည်။ Graymoud သည် ၁၈၂. ၅ မှတ် ဖြင့် ကြေး တံဆိပ် ကို ဆွတ်ခူး ရရှိခဲ့သည်။
Eileen Gu ကို ဆန်ဖရန် စစ္ စကို တွင်တရုတ် မိခင် နှင့်အမေရိကန် ဖခင် တို့မှ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ထင်ရှားသော ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုတွင် အချို့ ကိုအဆိုပြု ထားသည်မျက်ခုံးယူနိုက်တက်စတိတ် တွင် ဂူ သည်ယခုနှစ် ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ် တွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ကိုကိုယ်စားပြု ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ပွဲ အပြီး မှာတော့အင္တာဗ်ဴးပြည်တွင်း မီဒီယာ တွေနဲ့ အင်တာဗျူး တစ်ခုမှာ မန် ဒရ င်း ဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင် စွာ ပြော တတ်တဲ့ Gu Kailai က “ဒါဟာ သူ့ ဘဝမှာ အပျော် ရွှင် ဆုံး နေ့ ပဲ” လို့ ပြောပြီး “အကောင်းဆုံး ကြိုးစား ပြီး ကမ္ဘာ ကို ငါ့ ရဲ့ စွမ်းရည်ကို ပြ ချင် တယ်” လို့ ပြောတဲ့ အတွက် ခက်ခဲ တဲ့ ၁၆ ၂၀ ခုန် ကို နောက်ဆုံး ကြိုးပမ်း မှု အဖြစ် ရွေးချယ် ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ေပက်င္း ၿမိဳ႕ အေနာက္ပိုင္း စက္မႈ ဆင္ေျခ ဖံုး ရွိ Great Sky Shougang ဟု အမည္ ေပးထားေသာ သီးသန္႔ အားကစား ႐ံု တစ္ခုတြင္ က်င္းပသည့္ ဗိုလ္လု ပြဲသို႔ IOC ဥကၠ႒ ေသာ မတ္ ဘတ္ ခ်္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
အဂၤါေန႔က ေဘဂ်င္း ၏ ေကာင္းကင္ ျပာ ေအာက္တြင္ ပ်ံသန္း ခဲ့သည့္ ဂူ ဂဲ လ္က ေရႊတံဆိပ္ ဆု ဆြတ္ခူး ခဲ့စဥ္ (ဓာတ္ပံု-CCTV)
ဂူ ဂဲလ် ၏အ ောင် ပွဲ သည်တရုတ် ဆိုရှယ် မီဒီယာ တွင် လျင်မြန်စွာ ပျံ့နှံ့ သွားပြီး ပြည်တွင်း Weibo ပလက်ဖောင်း Weibo ၏ထိပ် ဆုံး သို့တက် ခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး က “Gu ရဲ့ နောက်ဆုံး ခုန် မှု ကိုကြည့် ပြီးတဲ့နောက် ဒီ ပြင်သစ် အားကစားသမား ဟာ အနည်းငယ် ထိတ်လန့် သွားတယ်လို့ ခံစား ရတယ်။ Gu ရဲ့ စိတ်ဓာတ် က ပိုပြီး လွယ်ကူ တယ်။ ဘာ ပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းသမီး ဖား ကို ဂုဏ်ယူ ပါတယ်။” Gu ‘sတရားဝင္Weibo တွင် အသုံးပြုသူ အမည် မှာ “Frog Princess Ailing” ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဖား ပုံစံ အစိမ်းရောင် နှင်း လျှော စီး သံခမောက် ကို အွန်လိုင်း တွင် ၀ ယ် ပြီးနောက် သူမ အားပေး ခဲ့သော အမည် ပြောင် ဖြစ်သည်။
ဂူ ဂဲလ် ၏ ရွှေတံဆိပ် သည် ၂၀ ၂၂ အိုလံပစ် တွင် တရုတ်၏ တတိယမြောက် ရွှေတံဆိပ် ဖြစ်သည်။ Freeski Air Games တွင် သူမ ၏ပထမဆုံး နေရာ အပြင် Gu သည် လာမည့် slopestyle နှင့် half pipe ပွဲများ ကိုအာရုံစိုက် မည်ဖြစ်ပြီး သူမသည် ဆုတံဆိပ် များ ရရှိရန် လူကြိုက် များသည်။
ဂူ သည် မိမိကိုယ် ကိုမြှင့်တင် ခြင်း၏ လှည့်ကွက် များကိုပြသ သည်စီးရီးEstee Lauder ၊ Victoria ‘s Secret ၊ Louis Vuitton နှင့် Cadillac အပါအ ၀ င် ထိပ်တန်း အမှတ်တံဆိပ် များ။ ဤ ကြိုးပမ်း မှုများသည် သူမ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မြင်သာ မှုကိုတိုးမြှင့် စေ ခဲ့သော်လည်း အကျိုးအမြတ် များသော တရုတ်ပြည်မကြီး ထက်များစွာ လျော့နည်း နိုင်သည်။